प्रचण्डको उतराधिकारी रेणु दाहाल ! – Points Nepal
प्रचण्डको उतराधिकारी रेणु दाहाल !
प्रकाशित मिति: बुधबार, पौष २१, २०७८ समय: १०:५८:२०
काठमाडौं । विश्वको इतिहाँस हेर्ने हो भने राजनीतिमा विरासत थाम्नका लागि नेतृत्वले आफनै परिवारका सदस्यलाई अगाडि वढेका कयौं उदाहरण छन् । पाकिस्तानका जुल्फीकर अलि भुट्टोले आफ्नो सन्तान बेनजिर भुट्टोलाई राजनीतिमा अगाडि बढाए।
नेपालमा धेरै नेताका सन्तान राजनीतिमा सक्रिय छन् । तर हालसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीका छोराछोरी प्रधानमन्त्री बन्न सकेका छैनन् ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी छोरी सुजाता कोइराला, गणेशमान सिंहका छोरा प्रकाशमान सिंह, बिपी कोइरालाका छोराहरू प्रकाश कोइराला र सशांक कोइराला राजनीतिमा अगाडि बढ्न खोजे। तर, उनीहरु जति अगाडि वढ्न खोज्छन्, उती नै पछाडि धकेलिँदै गएका दृष्टान्त हाम्रै अगाडि छन्।
जनताका छोराछोरीलाई जनयुद्धको नाममा अग्रणी मोर्चामा मार्न र मर्नका लागि अगाडी पठाउने ‘प्रचण्ड’ अहिले आफ्नो राजनीतिक विरासत जोगाउन परिवारका सदस्यहरूलाई स्थापित गराउन खोज्दै छन् ।
पद र पैसाको कुरा आउने बित्तिकै परिवार र सन्तान सम्झिने प्रचण्डले चुनाव र आन्दोलनको समयमा मात्रै जनतालाई सम्झिने गरेको पाईन्छ। प्रचण्ड दाहिना नहुँदा जनयुद्धका चर्चित नेतारकार्यकर्ता केन्द्रमा नपरेको उदाहरण आठौं महाधिवेशनबाट केन्द्रिय सदस्यमा चयन भएकाहरुको नामावली हेर्दा प्रष्ट हुन्छ।
अर्थमन्त्री शर्मासहित सहोदर भाइ अनिल शर्मा र बहिनी नारायणी शर्मा केन्द्रीय सदस्य चयन भएका छन् । त्यस्तै बहिनीज्वाइँ ओमनाथ ढुंगाना (ओम शर्मा) विगतदेखि नै केन्द्रीय सदस्य थिए ।
भाइबुहारी विमला केसी कर्णाली प्रदेश कमिटीको अध्यक्ष छिन् । शर्माका नजिकका नातेदार (भाइ) रुकुमपश्चिमका जिसस प्रमुख राजकुमार शर्मा र नजिक नाताका जगप्रसाद शर्मा पनि केन्द्रीय सदस्यमा चयन भएका छन् ।
उनको ठूलोबुबाका छोरा वसन्त शर्मा र माइलो बुबाकी छोरी लुम्बिनी गौतम पनि केन्द्रीय समितिमा छन् भने उनका कान्छा भाइ अनिल शर्मा पनि राजनीतिमा चल्तापुर्ता रुपमा छन् ।
अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीका पूर्वअध्यक्ष रमेश मल्ल र उनलाई अध्यक्षमा पराजित गरेका रन्जित तामाङ केन्द्रीय समितिमा अटाएनन्, तर शर्मा भने केन्द्रीय सदस्य बनेका छन ।
Last Updated on: January 5th, 2022 at 10:58 am